शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग : पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा - नेपालबहस
शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग : पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा
| २२:१२:०३ मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिगमा घटुवा भएको छ । शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबलअन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा पराजित भएसँगै पुल्चोक घटुवामा परेको हो । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा ‘बी’ डिभिजन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा पुल्चोक नयाँबस्ती युथ क्लबसँग २–१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
नयाँबस्तीका लागि अशोक तामाङ र विवेक गुरुङले एक एक गोल गर्नुभयो । यस्तै पुल्चोकका लागि सान्त्वना गोल शिरव तामाङले गरे। खेलको १९औँ मिनेटमा नयाँबस्तीका लागि अशोक तामाङले पहिलो गोल गरेका थिए ।
यस्तै खेलको ५८औँ मिनेटमा शिरव तामाङले गोल फर्काउँदै पुल्चोकलाई १–१ गोलको बराबरीमा पु¥याए । खेलको ६३औँ मिनेटमा विवेक गुरुङले गोल गर्दै नयाँबस्तीलाई २–१ गोलअन्तरले जित दिलाए । जितसँगै नयाँबस्तीले ११ खेलमा १५ अङ्क जोडेको छ । नयाँबस्ती लिगको नवौँ स्थानमा छ । पराजित भएको पुल्चोकले ११ खेलमा पाँच अङ्क मात्र जोड्न सक्यो ।
कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न कानूनको अभाव ७ दिन पहिले
रु रु जलविद्युतको आईपीओ कतिले भरे ? १ हप्ता पहिले
कर्णालीमा कोरोना जित्नेको संख्या १ हजार नाघ्यो १० महिना पहिले
ट्रम्पका पक्षधरहरूद्वारा अदालतमा दर्ता उजुरी खारेज [ कारण यस्ताे छ ] ५ महिना पहिले
प्रधानमन्त्री ज्यु, जेट विमानलाई सफल अवतरण गराउनु हुन्न ? ३ महिना पहिले